Ururka Beeralayda Baradhada iyo Khudaarta ee Pula, Kanlaon City, Filibiin - Wargeyska Nidaamka Baradhada
Bogga guriga Digest
в Digest, Wararka adduunka, Isbeddellada / Isbeddellada
Talaadada, waxaan sii wadeynaa inaan daabacno agab gaar ah oo ka socda WPC (Congress Potato World), oo ku saabsan abaabulka silsilad wax soo saar baradho ah oo hufan oo dalal kala duwan oo adduunka ah. Waxaan horay uga soo hadalnay dalalka Afrika iyo Shiinaha. Hadda aan u leexanno Filibiin.
Toddobaadkan waxaan ka hadli doonaa Ururka Beeralayda Filibiin iyo abuurista iniin baradho caafimaad leh.
Macluumaadkan waxaa bixiyay Dr. Victoria Demonteverde oo ka tirsan Xarunta Cilmi-baarista iyo Tababarka Nidaamyada Baradhada iyo Dr. Peter Vander Zaag oo ka tirsan Machadka Nidaamyada Nidaamyada Baradhada Sunrise.
PPVFA (Ururka Beeralayda Filibiin) wuxuu ka kooban yahay inta badan beeralayda nolol maalmeedka kuwaas oo u muuqda inay aad u liitaan oo haysta dhul aad u yar, in ka yar 1 hektar qoyskiiba. Waagii hore, dhex dhexaadiyayaashu waxay bixin jireen dalagyo qiimo aad u sarreeya waxayna dalagyada ku iibsan jireen qiimihii ugu hooseeyay si ay u soo celiyaan amaahda oo ay ka helaan faa'iido badan.
PPVFA-da cusub ee la aas aasay waxay kor u qaadaa wax-soo-saarka joogtada ah iyo suuqgeynta baradhada, baradhada macaan, khudaarta iyo dalagyada kale. Waxa uu sidoo kale u ololeeyaa hab-dhaqanka beerashada ee horumarsan iyo isticmaalka tignoolajiyada si loo gaaro yoolalka aan soo sheegnay. Ururkan beeralayda ah waxa la soo agaasimay sanadkii 2016 waxana si rasmi ah uga diwaan galisay Waaxda Shaqada iyo Shaqaalaynta (DOLE) June 19, 2017
2014 iyo 2015, CPF waxay bilawday inay la shaqeyso beeralayda si ay u qiimeeyaan noocyo kala duwan oo baradho ah oo ka socda Xarunta Cilmi-baarista iyo Cilmi-baarista ee Waqooyiga Filibiin, Jaamacadda Gobolka Benke, iyo dalal kale. Dhirta laga soo saaro iniinaha baradhada dhabta ah ayaa sidoo kale ay qiimeeyeen beeralayda. PSRTC (Xarunta jeermiska) waxaa la aasaasay 2016 waxayna fulisay barnaamijyo mowduucyo ah oo ay ku jiraan hordhac, xulashada iyo qiimeynta jeermiska, cilmi baarista tignoolajiyada sare iyo waxbarashada beeralayda. Daraasad lagu sameeyay heerka wax-soo-saarka baradhada gudaha iyo beeralayda ka soo jeeda meelaha beeraya baradhada ayaa lagu martiqaaday " Bandhigga Natiijooyinka Cilmi-baarista iyo Wada-tashiga Qorsheynta ee Beeralayda" Ogosto 29, 2016 ee PSRTC.
Wadashaqayn iyo taageerada hay'adaha ee ururka beeralayda cusub
Intii uu socday wada hadalkan, beeralaydu waxay garteen baahida loo qabo in la ilaaliyo warshadaha baradhada maxalliga ah ee sii yaraanaya waxayna xaqiiqsadeen baahida loo qabo in la abuuro urur horumariya wax soo saarka baradhada. Intaa ka dib, dhowr tababar oo ku saabsan baradhada beerashada ayaa la qabtay.
Diisambar 2016, beeralaydu waxay qabteen shir urureed waxayna ansixiyeen Axdiga si ay si rasmi ah u abaabulaan ururka. Bishii Jannaayo, hay'addu waxay ka codsatay aqoonsi DOLE waxaana codsigeeda si rasmi ah loo ansixiyay Juun 19, 2017. Xubinimada ayaa si muuqata kor ugu kacday, waxaana beeralayda xiiseeya ku biiraan ururka ku dhawaad ​​toddobaad kasta.
Walxaha beeridda baradho caafimaad leh oo tayo sare leh
PSRTC waxay haysaa shaybaadhka dhaqanka unugga si ay awood ugu yeelato inay soo saarto oo u faafiso agabka laga baadho cudurada. PSRTC waxa ay sidoo kale nadiifisay xayndaabyadii maxaliga ahaa ee laga helay beeraleyda beeralayda iyo agabka beerista. Walxaha beeritaanka waxaa sii faafiyay CPF ee beeralayda iyadoo la adeegsanayo habab isku dhufasho degdeg ah iyadoo la adeegsanayo gooyn caarada. Beeraley kale oo Kabagtasan ah, Kodkod, ayaa ku faafinaya kolonyada aqalka dhirta lagu koriyo si ay u soo saaraan digriiga G0 iyo G1 beeralayda kale.
Source: Mawduuca Shirweynaha 2022: Isbeddelka Adduunka ee Baradhada
Tags: ururka beeralaydabaradhada abuurFilibiin
Marka la beero baradhada, nidaamka GLONASS ayaa faa'iido leh